Shiinaha Digaag digaag la warshad basbaas iyo soo saarayaasha | Huikang
Habka wax soo saarka mid
1 lafaha bowdada digaaga waa laga saaray, ku dar 1/4 basal, 2 xaleef sinjibiil, 2 qaado oo khamri ah oo wax lagu kariyo, cad cad scallion, isku kari dhowr saacadood dheriga galka ah, isticmaal fargeeto si aad uga soo saartid qaybo badan oo bowdada ah hilib Dalool yar.
2.1 qaado oo budada basbaaska madow ah, 2 qaado oo khamri karinta ah, 1 qaado oo ah sooska fudud, 2 qaado oo ah khamri cas, nus malqacad oo basbaas madow ah oo imika la shiiday, 2 qaado oo sooska oyster ah, 1 qaado oo sonkor ah, in yar oo milix ah, jarjar xoogaa basasha cusub ah si aad mar dambe u isticmaasho, mashiinka dushiisa saar lakabyo digaag ah oo leh lakabka basasha cayriin oo ku rid qaboojiyaha habeenkii. Ka rog haddii ay wax jiraan.
3. Si khafiif ah u jeex gabal subag ~ waa inuu noqdaa 10G gudahood, ku kari basasha, oo markuu basashu jilicsan yahay, ku dar maraq karsan lafaha digaagga, 1 qaaddo oo maraqa yaanyo ah, 2 qaado oo khamri cas, 2 qaado oo Suugo soy ah, 1 qaado oo basbaas Madoow ah, nus qaado oo ah basbaaska madow ee imika dhulka lagu daray, qadarka ku habboon ee sonkorta iyo milixda, si fiican u walaaq, ku dar baradhada la shiiday, si siman u walaaq, ugu dambayn maraqa waa qaro weyn yahay oo waad damin kartaa dabka.
4. Ku kari boqoshaada iniinta galleyda, ku kari subagga, kuna rid koob yar oo ka sameysan kaabash guduud ah.
5. Ku rid baradhada uumiga ah iyo karootada dheriga oo isku shiil illaa inta ay iskutallaabtu ka noqonayso dahab, ka dibna waxaad ku ridi kartaa saxanka.
6. Ku dar 10G subag iyo basasha udgoon udgoon.
7. Marka hore, dubka digaagga hal dhinac ku shiil, ku dar qaaddo khamri cas, ku riix digaagga digaagga leh spatula, oo shiil ilaa 2 daqiiqo wadar ahaan 2 daqiiqo.
8. Diyaari galley, ukumo, iwm.
9. Saxanka meel dhig.
10. Markuu digaaggu ka baxo dheriga, waa la cuni karaa.
Habka wax soo saarka labo
1. Kala saar qaybaha bawdada digaaga, ku garaac dhanka hore in mudo ah, ka dibna ku garaac dhanka dambe;
2. Ku dar khamri wax lagu karsado, hilib la kariyey, budo shan-xawaash ah, soos fudud oo soy ah, isku walaaq oo u daa in uu ku kariyo habeenka talaagada;
3. Saliidda ku shub digsiga, ku dar garooyinka digaagga la kariyey, isku shiil shan daqiiqo labada dhinacba;
4. Waxaad shiishaa ilaa inta hilibka la kariyo oo aad u jarjareyso qaybo yaryar;
5. Tuuji suugada basbaaska madow.
Hore: Digaag digaag Pao
Xiga: Hilib doofaar leh oo la ilaaliyay
Basbaaska Jalaatada la qaboojiyey iyo Basasha
Basbaas la jarjaray oo la qaboojiyey iyo Basasha
Basbaaska Cagaaran iyo Basasha cagaaran
Basbaaska la qaboojiyey iyo Basasha